14/09/2018 admintriatra 0
Mandalo fotoan-tsarotra ny tantara an-tsehatra na ny teatra malagasy amin’izao fotoana. Eo am-piandrasana izay mety hifohazany amin’ny endrika samihafa, dia ireo ivon-toeran-kolontsaina vahiny no miezaka mamelona izany. Mandalo eto amintsika ny kaompania avy any La …Tohiny
Miara-dia hatrany amin’ny seho takariva ny tontolon’ny sakafo. « Divay sy fromazy ary Jazz » no lohatenin’ny hetsika atolotry ny trano fisakafoanana 313 etsy amin’ny Hotel Le Louvre Antaninarenina, anio alina manomboka amin’ny 9 ora. …Tohiny
Voin-kava mahatratra. Manao sesilany ny finiavan’ireo mpanakanto namana nanohina ny antso nataon’ny fianakaviana. Maro ireo seho ho tolo-tanana an’i Fanaiky, mpitendry gitara beso ary mpikambana ao amin’ny tarika Solomiral. Omaly dia efa nisy ireo seho …Tohiny
Hatramin’ny nitsanganan’ny governemanta tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, ny 11 jona 2018 noho makanty, mbola tsy nahavaha ny olan’ny mponina izy ireo. Ankehitriny mantsy, manomboka midangana izay tsy izy indray ny vidim-bary. Nahitana fiakarany 50 Ar …Tohiny
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny vondron’ny parlemantera maro an’isa sady manohana ny fitondrana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izany indrindra, namoaka ny heviny ireo parlemantera maro an’isa avy amin’ny Antenimieram-pirenena sy Antenimieran-doholona omaly, tetsy amin’ny Hotel ...Tohiny